အနုပညာလောက Archives - Page 8 of 8 - Khitalin Media
ဗစ်တိုးရီးယားလေးကိစ္စမှာ သိန်း ၈၀၀ အမြတ်ထွက်တယ်ဆို အသံဖိုင်ထွက်လာတဲ့အပေါ် ပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော်လင်းလင်း
April 23, 2020 by Khitalin Media
ဗစ်တိုးရီးယားလေးကိစ္စမှာ သိန်း ၈၀၀ အမြတ်ထွက်တယ်ဆို အသံဖိုင်ထွက်လာတဲ့အပေါ် ပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော်လင်းလင်း တစ်ကယ်တော့ ကျနော်တို့ကို စော်ကားထားတဲ့ အသံဖိုင်ကိစ္စက မဟုတ်ဘူးလို့ ထွက်ရှင်းရတာ လွယ်ပါတယ်။ ဖြစ်လဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုလဲ ကျနော်တို့ကို ချစ်ကြခင်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ၊ မိသားစုတွေ၊ ပရိတ်သတ်တွေ၊ ရောင်းရင်းတွေ အားလုံးကလဲ သိလို့ တစ်ခုခုလုပ်ရမယ်၊ ဒီတိုင်းထားလို့မရဘူး ဆိုပြီး ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူဖို့ လာဆက်သွယ်ကြတာကလဲ အသံဖိုင်ထွက်ကတည်းကပါဘဲ။ အသံဖိုင်စထွက်ကတည်းက နားထောင်ပြီးပါပြီ။ သိမ်းလဲထားပါတယ်။ သို့သော် နားထောင်ရုံနဲ့ ပြီးစလွယ် မဟုတ်တမ်းတရားစော်ကားထားတဲ့ ဒီကိစ္စက ရိုးရှင်းသလား? အရောင်တွေပါလား? စဉ်းစားရတယ်။ ဘာလို့ဆို ကပ်ရောဂါနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးရှုပ်နေတဲ့ ကာလမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးအကဲစပ်တဲ့ သမီးလေး V ကိစ္စနဲ့ တစ်မိသားစုလုံးသိက္ခာကျအောင် မဟုတ်တမ်းတရားစွတ်စွဲတာက ဘယ်အထိ ရည်ရွယ်တာလဲပေါ့။ ဒီကာလမှာ … Read more
ဘာတစ်ခုကိုမှ အလေးအနက်မထားတော့ဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပဲ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ …
Beauty Blogger မလေး ပန်ကိတ်ဒါဒါကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးနဲ့ အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ သူမရဲ့ အလုပ်လေးတွေကိုလည်း Beauty Blogger အလုပ်ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကာ အောင်မြင်လာတဲ့ ပန်ကိတ်လေးက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို အများဆုံးရရှိထားတဲ့ သူပါ..။ ပန်ကိတ်လေးက လက်ရှိမှာ Sngle ဘဝနဲ့ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ရင်း အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးနေတဲ့သူ ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ ပွင်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုတတ်ပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေထိုင်တဲ့ အပြုအမူလေးတွေဟာ သူမကို ပရိသတ်တွေက အချစ်ပိုရတဲ့ အချက်လေး ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူမရဲ့ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ အလှအပ ဆိုင်ရာလေးတွေကို သူမရဲ့ ပေ့ခ်ျကနေ တင်လေ့ရှိပြီး ခံစားချက်လေးတွေကိုတော့ သူမရဲ့ အကောင့်မှာ တင်ကာ ရင်ဖွင့်လေ့ရှိသူပါ..။ … Read more
အဆိုတော်လင်းလင်း အဆိုတော် မျိုးကြီးကို ဒဲ့ပြောပြီ ( ရုပ်သံ )
April 19, 2020 by Khitalin Media
အေပရယ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာတော့ အဆိုတော်လင်းလင်းဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တွေ့ရှိလူနာအဖြစ် ဝေဘာဂီမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ တေးသံရှင် မျိုးးကြီးဆီကနေ သတင်းမေးရင်းနဲ့မျိုးကြီးအနေနဲ့က အပြင်ကသတင်းတွေပြန်ကြားပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ ကြားသိရတဲ့ အကြောင်းကို အခုလို ပြောပြထားပါတယ် ။ “ခင်လို့ ရင်းနှီးလို့ ကွက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုနာမည်တပ်ပြီး သူမှတစ်ဆင့်၊ သူမှတစ်ဆင့် လို့ တိတိကျကျပြောတာက တစ်မျိုးကြီးဘဲ။ ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ် Q ဝင်မယ့်သူတွေကိုလဲ တုံ့ဆိုင်းရာမရောက်ဘူးလား။ ဒီလိုနာမည်ပါမှာကြောက်ပြီး ရပ်ကွက်ဆေးခန်းတွေနဲ့ ကျိတ်ကုရင်တော့ ခတ်ကုန်မှာဘဲ။ ရုံးစာလိုလို၊ အတွင်းစာလိုလို နဲ့ အသွင်ယူထားတဲ့ စာတွေကလဲ မျိုးစုံဆိုတော့ ဘာတွေမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ လူစုလူဝေးပွဲမှတဆင့်လို့ သုံးရင်သုံး။ ဒါမှမဟုတ် ,, စီစဉ်တဲ့လူနာမည် အတိအကျနဲ့ပြောပေါ့။ လူအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာ သူ့ဆီကဘဲ ကူးတာလား။ ကျနော်တို့ စကားပြောကြည့်တော့ သူလဲ … Read more
“လွ တ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရတဲ့ အထဲ ဇ နီးဖြစ်သူ မေသန်းနု မ ပါတာကြောင့် ခံစားချက်လေးတွေကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဇင်ယော်မောင်မောင်”
April 17, 2020 by Khitalin Media
အွန် လိုင်း ပေါ်မှာ လူစိတ်ဝင်စားမှု အများဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးကြီး မေသန်းနုရဲ့ ငွေကြေးလိမ်လည်မှု နဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ သတင်းကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ကြားသိပြီးကြပြီ ထင်ပါတယ်နော်..။ မေသန်းနုကတော့ ငွေကြေး လိမ်လည်မှုနဲ့ တရားစွဲခံရပြီး ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ် ကျခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်.။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဇင်ယော်မောင်မောင်က အယူခံဝင်ခဲ့ပေမယ့် ကျရှုံးခဲ့ပါတယ်..။ ဒီနေ့ ဧပြီလ (၁၇)ရက်နေ့ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ တော့ ဇင်ယော်မောင်မောင် က ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ ချမှတ်ပေးလိုက်တဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရတဲ့ လူတွေထဲမှာ မိန်းမဖြစ်သူ မေသန်းနု ပါဝင်ခွင့် မရခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးကို “အ တိတ် ကံ…! လွှတ် မဲ့ ထဲ မ ပါ ပါ ခင် ဗျာ” … Read more
အ တတ်နေ့ မှာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ကိုယ် တိုင် မုန့်လိပ်ပြာလုပ်ကျွေးနေတဲ့ ဦးကျော်သူ
April 16, 2020 by Khitalin Media
နိုင် ငံကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ပရဟိတ မင်းသားကြီး ကျော်သူကတော့ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းက စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကို ကိုယ်တိုင် မုန့်လိပ်ပြာလုပ်ကျွေးနေတဲ့အကြောင်းကို မုန့်လိပ်ပြာပူပူနွေးနွေးလေး ဗျို့! သင်္ကြန်အတက်နေ့ ကြာသပတေးနေ့မှာ အတာစားတာ ကြာသပတေးဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ အာဟာရဒါနလုပ်တဲ့ ကြာသပတေးနေ့ ဘော်လံဒီယာများရဲ့ မုန့်ကလည်း ကြာသပတေးနာမ် မုန့်လိပ်ပြာတဲ့ဗျာ။ နာရေးလမ်းကြောင်းလေး ခဏအားလပ် တုန်း အများရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ အနုပညာဆန်တဲ့ မုန့်လိပ်ပြာ ကို ခေတ္တခဏ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြည့်မိပါတယ်။အရမ်းကိုအရသာရှိပြီး နူးညံ့မွေ့လျော်ကာအနုပညာဆန်တဲ့ မုန့်လိပ်ပြာလေးပါခင်ဗျ။” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ကျော်သူကတော့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)နဲ့အတူ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်နေပြီး ချစ်ဇနီးရွှေဇီးကွက် ကလည်း ဘေးကနေ ပါရမီဖြည့်ရင်း ကုသိုလ်တွေပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အတာသင်္ကြန်အတတ်နေ့ဖြစ်တဲ့ ယနေ့မှာတော့ အာဟာရဒါနပြုတဲ့အနေနဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းက စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကို ကိုယ်တိုင်မုန့်လိပ်ပြာတွေ လုပ်ကျွေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ပရိသတ်ကြီးရေ နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရင်သရုပ်ဆောင် … Read more
မိနျးမဖွဈသူရဲ့ အိပျမကျအတိုငျး ဝူဟနျဗိုငျးရပျကွောငျ့ သဆေုံးလူနာထှကျပျေါလာတာကို အံ့သွတကွီးဖွဈနတေဲ့ မိုးမို
April 15, 2020 by Khitalin Media
အဆိုတော် မိုးမိုးဟာအနုပညာလုပ်ငန်းတွေလညလုပ်ဆောင်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းသာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မိသားစုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးမိုးတို့ဇနီးမောင်နှံကနေနဲ့လ၊ရွှေနဲ့မြလို လိုက်ဖက်လွန်းရုံသာမကစိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ဘုရားတရားလည်းလုပ်ကိုင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်မှာတော့မိုးမိုးကဇနီးဖြစ်သူရဲ့အိပ်မက်အတိုင်းတကယ်ဖြစ်လာတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကို အခုလိုပဲပြောပြလာပါတယ်။ “မနက်က၃နာရီမှာပေါက်ခေါင်းကလူနာ ဆုံးသွားပြီတဲ့ဒီဗွီဘီကတင်တာ။ထူးဆန်းတာကညကကိုယ်အလုပ်လုပ်နေချိန်ပီပီကအိပ်မက်မက်လို့messageပို့တယ်။သူကညကပို့၊မနက်ကျ တကယ်ကြီးဆုံးတာ။ ငါ့မိန်းမရယ်မက်မယ့်မက်ကောင်းတာလေးတွေပဲမက်စေချင်ပါတယ်ဟာ။အိပ်မက်ထဲမှာအင်ဒီးယန်းကြီးကသူ့ကိုလာပြောတာတဲ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဂုနောအနန္တော၊ဓမ္မဂုနော အနန္တော၊သံဃာ့ဂုနောအနန္တောကိုရွတ်ပါလို့လဲပြောသွားသေးသတဲ့။ အလင်းတိုင်သုံးတိုင်လဲထွန်းပါတဲ့။ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်လုပ်ရမှာပဲကုသိုလ်ရတာပေါ့။အကျိုးလေးများရှိလို့ရှိငြားတင်ပေးတာ။ လာမဆဲကြနဲ့နော်လုပ်ချင်လုပ်မလုပ်ချင်နေ။” ဆိုပြီးမိုးမိုးကပြောထားပါတယ်။ ဘုရားတရားအရမ်းလုပ်လွန်းတဲ့မိုးမိုးတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့အခုလိုထူးခြားတိုက်ဆိုက်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုကြောင့်တော်တော်လေးအံ့အားသင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်းမိုးမိုးပြောတဲ့အရာလေးကိုလုပ်ပြီးကုသိုလ်ယူကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။ credit Unicode အဆိုတျော မိုးမိုးဟာအနုပညာလုပျငနျးတှလေညလုပျဆောငျနသေလိုတဈဖကျမှာလညျးသာယာပြျောရှငျဖှယျကောငျးတဲ့မိသားစုလေးကိုပိုငျဆိုငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ မိုးမိုးတို့ဇနီးမောငျနှံကနနေဲ့လ၊ရှနေဲ့မွလို လိုကျဖကျလှနျးရုံသာမကစိတျတူကိုယျတူနဲ့ဘုရားတရားလညျးလုပျကိုငျလရှေိ့ကွပါတယျ။ ဒီနမေ့နကျမှာတော့မိုးမိုးကဇနီးဖွဈသူရဲ့အိပျမကျအတိုငျးတကယျဖွဈလာတဲ့ထူးဆနျးတဲ့အဖွဈအပကျြကို အခုလိုပဲပွောပွလာပါတယျ။ “မနကျက၃နာရီမှာပေါကျခေါငျးကလူနာ ဆုံးသှားပွီတဲ့ဒီဗှီဘီကတငျတာ။ထူးဆနျးတာကညကကိုယျအလုပျလုပျနခြေိနျပီပီကအိပျမကျမကျလို့messageပို့တယျ။သူကညကပို့၊မနကျကြ တကယျကွီးဆုံးတာ။ ငါ့မိနျးမရယျမကျမယျ့မကျကောငျးတာလေးတှပေဲမကျစခေငျြပါတယျဟာ။အိပျမကျထဲမှာအငျဒီးယနျးကွီးကသူ့ကိုလာပွောတာတဲ့ပွီးတော့ဗုဒ်ဓဂုနောအနန်တော၊ဓမ်မဂုနော အနန်တော၊သံဃာ့ဂုနောအနန်တောကိုရှတျပါလို့လဲပွောသှားသေးသတဲ့။ အလငျးတိုငျသုံးတိုငျလဲထှနျးပါတဲ့။ဟုတျဟုတျမဟုတျဟုတျလုပျရမှာပဲကုသိုလျရတာပေါ့။အကြိုးလေးမြားရှိလို့ရှိငွားတငျပေးတာ။ လာမဆဲကွနဲ့နျောလုပျခငျြလုပျမလုပျခငျြနေ။” ဆိုပွီးမိုးမိုးကပွောထားပါတယျ။ ဘုရားတရားအရမျးလုပျလှနျးတဲ့မိုးမိုးတို့ဇနီးမောငျနှံကတော့အခုလိုထူးခွားတိုကျဆိုကျတဲ့အဖွဈတဈခုကွောငျ့တျောတျောလေးအံ့အားသငျ့နတောပဲဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျးမိုးမိုးပွောတဲ့အရာလေးကိုလုပျပွီးကုသိုလျယူကွပါလို့တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျနျော။ credit
အိမ်တွင်း သင်္ကြန်လေးကို မိသားစုလိုက် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆင်နွှဲနေကြတဲ့ ခင်လှိုင်တို့ မိသားစု
April 14, 2020 by Khitalin Media
ခင်လှိုင်ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်… ။ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ထင်ဆိုသလို ဘယ်ကဏ္ဍကမဆို ပီပီပြင်ပြင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်တတ်သူလည်ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကို ရိုက်ကူးနေပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုနဲ့အတူ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေသူပါ..။ အမြဲ တမ်း ပျော်ရွှင်တက်ကြွနေတဲ့ ခင်လှိုင်တို့ မိသားစုကတော့ တကယ့်ကို ပျော်စရာတွေအပြည့်နဲ့ နေတတ်တဲ့သူတွေလို့ ဆိုရင် မှားမယ် မထင်ပါဘူး..။ ခင်လှိုင်ရဲ့ သားနဲ့ သမီးဖြစ်သူ နေရဲနဲ့ သဇင်ထူးမြင့်တို့ဟာလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ရင်း အခိုင်အမာ ပရိသတ်တွေကို ရရှိနေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယနော်..။ ဒီနေ့ ဧပြီလ (၁၂)ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာတော့ ခင်လှိုင်က မိသားစုလိုက် အိမ်တွင်းသင်္ကြန်ကျင်းပနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို “အိမ်တွင်းပုန်း မိသားစုသင်္ကြန် ..။ ချစ်မိတ်ဆွေတို့လည်း အိမ်မှာကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ..။” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ … Read more
အနုပညာရှငျတှအေတှငျးရေးကို လိုကျဖှတဲ့ အကောငျ့ပိုငျရှငျ နောကျကွောငျးကို ဖှငျ့ခလြိုကျတဲ့ ဒေါငျးဝေ
April 11, 2020 by Khitalin Media
အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အတွင်းရေးကိစ္စတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဖြန့်ဝေတဲ့ Han Nyein Oo အကောင့်ပိုင်ရှင်ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ လက်တလောနာမည်ကြီးနေတဲ့ မင်းရာဇာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသံဖိုင်တွေကို လူသိရှင်ကြားဖြန့်ဝေပြီး အိမ်အကူအမျိုးသမီးကို နှမချင်းမစာနာပြောဆိုတာကြောင့် လူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်းခံနေရတဲ့ Han Nyein Oo အကောင့်ပိုင်ရှင် သရုပ်ဆောင် ဒေါင်းဝေက အခုလိုပဲ ဖွင့်ချလာပါတယ်။ “မင်းလိုကောင်က အနုပညာရှင်တွေအကုန်သတိထားတဲ့ ရီရတယ်။ အေးလွတ်အောင်ပြေး။ တောင်ကြီး လဝကနဲ့ ကညန မှာငါ့အပေါင်းသင်းတွေဒုနဲ့ဒေးရှိတယ်။ အဲ့၂ခုနဲ့ တိုက်စစ်ပြီးလိုက်ရင်မင်းမလွတ်ဘူး။ သိဖို့။ အခု မင်းရာဇာ ကိစ္စမှာ တော်ပီလေတင်ပီးသားတစ်ခုနဲ့တင်။ မအေ နှမ မစာမနာ အပိုင်း ၃ ဆိုပြီး သတင်းအမှန်မဟုတ်ပါဘူး ဆိုပီးဖင်ပိတ်ငြင်းတယ်။” “ကိုယ့်အကောင့်ပေါ်ပြူလာဖြစ်ဖို့ သူများအတွင်းကိစ္စ မဟုတ်မဟက် live တောင်ထက်လွှင့်ပီးဖင်ပိတ်တက်ငြင်းတယ်။ ခုတော့မင်းကြောင့် … Read more
ယုန်လေးဟာ သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်၊ ဒါရိုက်တာ စတဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့အပြင် လူမှုကူညီရေးမှာလည်း လက်မနှေးသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားတဲ့ မင်းရာဇာရဲ့ အိမ်အကူမိန်းကလေး ကိစ္စမှာလည်း သူ့အနေနဲ့ ဝင်မပါဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားကာမှ မိန်းကလေးရဲ့အကြောင်းတွေ သိရတဲ့အတွက် ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်သွားမယ့်အကြောင်းကို ပြောပြထားပါတယ်။ “ဒီကိစ္စကို စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ချင်းစာတော့ ဒေါသဖြစ်တယ်။ တစ်နေ့က အစ်မတစ်ယောက် ph ဆက်ပြောတဲ့ အထိ ကျွန်တော်ဝင် မပါချင်ဘူး အစ်မလို့ပြောပြီးမှ ကြည့်ရက်စရာမရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ တွေ့တယ်။ ဆက်မကြည့်နိုင်ပါဘူး။ ဒီနေ့ သတင်းလေး ထပ်ကြားတာ အဲ့ညီမလေး ရဲ့မိဘတွေ ငွေအင်းအားရှိသလောက်လေးနဲ့ ဆေးတက်ကုနေရတာကြားတော့ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။” “တစ်ချို့တွေကလည်း အနုပညာရှင်တွေ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ပေါ့။ အနုပညာရှင်ဆိုတာ နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ခင်များ။ လူနဲ့ပဲ … Read more